Igbo, John: Lesson 070 - Jisos n'ofe Jọdan (Jọn 10:40 - 11:16) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 070 (Jesus across the Jordan)
40 O we pua ọzọ n'ofè Jọdan rue ebe Jọn nēme baptism na mbu: ọ we nọgide n'ebe ahu. 41 Ọtụtụ ndị bịakwutere ya. Ha we si Ya, N'ezie Jọn emeghi ihe-iriba-ama: ma ihe nile Jọn kwuru bayere Nwoke a bu onye ezi-okwu.
Esemokwu dị n'etiti Jizọs na ndị Farisii malitere; ha kpaliri ndị ndú ndị mmadụ mgbe o gwusịrị ngwongwo na Bethesida (Isi nke 5). Na njedebe nke ọbịbịa nke atọ ya na Jeruselem, agha a kwalitere na njedebe. Ìhè nēhè nime ọchichiri; ma ọchichiri ahu ejideghi ya. Mgbe nile Jizos kpughere ya n'onwu nke onwu. Ọ banyere n'ụlọ nsọ ugboro ugboro, na-eduzi ndị na-eso ụzọ ya ka ha tozu okè na ihe ọmụma na ntụkwasị obi mgbe ndị iro ya nọ na-akpọ ya asị.
Mgbe ha na-eso ememme nraranye, Jizọs hapụrụ Jeruselem wee gaa n'ógbè dị n'ofe Jọdan ebe Ndị Nchịkwa Ukwu enweghị ikike. N'ebe a Jọn Onye Na-eme Baptizim kwusara ozi ọma n'oge gara aga, n'èzí ndị Juu, mana n'okpuru otu eze ndị Herod. A maara onye Baptist ahụ n'ebe ahụ; àmà ya nye Jizos putara.
Ndị kweere n'ihi Baptizim ahụ nọgidere n'okwukwe ha. A gbupụrụ onye nkụzi ha isi. Mgbe Jizos rutere, ha rutere ya, n'amara ịdị umeala n'obi ya, ebube na ike ya. Jizọs nyere ha ihe atụ nke ihe ịrịba ama ya, jiri ikwesị ntụkwasị obi na-ekwusa banyere Chineke na mmadụ. Otutu mmadu meghere obi ha nye Ozioma ah, jidesie okwukwe ha ike n'ihe banyere o b la nke onye Baptism,O b ezie na Onye Baptist ekwenyeghi ihe ebube iji mee kao ghau l di ike. Ma ngwa ngwa Jisos biakutere ha, ha tukwasi obi na Ya dika Onye nzoputa na Onye nzoputa.
1 Ma otù nwoke nāria ọria, Lazarọs onye Betani, nke si n'obodo ntà Meri na nwanne-ya nwanyi, bú Mata. 2 Ọ bụ Meri ahụ, onye ji mmanụ na-ete mmanụ tee Onyenwe anyị mmanụ, jirikwa ntutu isi ya hichaa ụkwụ ya, nwanne ya nwoke bụ Lazarọs na-arịa ọrịa. 3 Ya mere umu-nne-nwanyi zigara Ya ozi, si, Onye-nwe-ayi, le, onye ahu nke I nāhu n'anya nādighi ike.
N'oge nkwusa Kraist na mpaghara Jọdan, otu nwoke aha ya bụ Lazarọs dara ọrịa. Ọ bụ n'otu obodo dị n'Ugwu Oliv. Mgbe mgbe, Jizọs nọ n'ụlọ ya. Okwu Kraist na Mata, nwanne Lazarọs, bu onye a ma ama. John ekwughị ihe ndị ahụ ebe ọ bụ na ha dị na ozioma ọzọ. Otú ọ dị, ọ na-agwa anyị banyere Meri onye wụsara ite mmanụ n'isi Jizọs. Onye nkwusa ozioma kwuru na nwanyị a na-agụ agụụ maka okwu Onyenwe anyị. Mgbe o jiri mmanu tee mmanu ya, o ji ntutu ya hichaa ha (Jọn 12: 1-8). O gosipụtara umeala n'obi, okwukwe na ịhụnanya maka Ọkpara Chineke.
Akụkọ banyere ọrịa Lazarọs mere ka Jizọs nwee mwute. Otú ọ dị, okwukwe ụmụnna nwanyị ahụ mere ka ọ sonyere ha. Ha arịọghị Jizọs ka ọ bịa ngwa ngwa iji gwọọ enyi ya, ma ọ bụ zitere ya ozi banyere ọnọdụ ya, na-enwe obi ike na ọ ga-agwọ ya site n'ebe dị anya. Obi siri ha ike na ịhụnanya Jizọs nwere maka Lazarọs ga-akpali ya ime ihe. "Lazarọs" putara "Chineke nyeworo aka". Ya mere, aha a ghọrọ iwu maka ọrụ ebube ikpeazụ a kpọtụrụ aha na Jọn.
4 Ma mgbe Jizọs nụrụ ya, ọ sịrị: "Ọrịa a abụghị ọnwụ, kama ọ bụ n'ihi ebube Chineke, ka e wee nye Ọkpara Chineke otuto." 5 Ma Jizọs hụrụ Mata na nwanne ya nwaanyị na Lazarọs n'anya. 6 Ya mere, mgbe ọ nụrụ na ọ na-arịa ọrịa, ọ nọrọ ụbọchị abụọ n'ebe ọ nọ. 7 Mgbe nke a gasịrị, ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: "Ka anyị banye na Judia." 8 Ndị na-eso ụzọ ya wee sị ya: "Rabaị, naanị ndị Juu na-achọ ịtụ gị nkume, ị na-agakwa ebe ahụ?" 9 Jizọs zara ya, 'elekere iri na abụọ nke ìhè? Ọ bụrụ na mmadụ na-ejegharị n'ehihie, ọ gaghị asụ ngọngọ, n'ihi na ọ na-ahụ ìhè nke ụwa a. Ma ọ buru na madu ejeghari n'abali, ọ nāsu ngọngọ, n'ihi na ìhè adighi nime ya.
Mgbe ozi ahụ ruru Jizọs, ọ maara banyere mgba ya na ọnwụ nke ọnwụ. O buru amụma na onye ọrịa ahụ agaghị abụ ọnyà nke ọnwụ, ma n'ime ya ka ebube Chineke ga-enwu. Jizọs maara site na Mmụọ Nsọ ihe ọ ghaghị ime tupu ndị enyi ya agabiga, ikike ya ga-apụta site n'ịkpọlite onye nwụrụ anwụ n'ebe dị anya n'ọnụ ụzọ ámá Jerusalem. Nke mere na ndi mmadu bi na Jerusalem enwegh ihe obula maka ekwegh ekwe.
Otuto Chineke na ebube nke Kraist bụ otu. Ebube dị ebube, n'ihi na ọ na-ebute ọnwụ ma merie ya. Ihe mmadu n'ozuzu na-aru n'olileanya nke onwu n'onodu ya. Ọnwụ na-eduga ná mbibi, ha na-eche. Jizọs maara ihe Nna ya chọrọ, ọnwụ na ihe ọ rụpụtara adịghịkwa echegbu ya, ma ọ ghọtara ihe kpatara ọnwụ. Ọ nwere ike ịba ndụ n'ime ụwa na-arịa ọrịa.
Jizọs agaghị Betani; ọ na-egbu oge maka ụbọchị abụọ. O kwere ka ọnwụ gbuo enyi ya. Ndị na-eso ụzọ Jizọs tụrụ ụjọ ịnụ na ọ ga-alaghachi na Judia ebe ọ bụ na ha hụrụ mbọ iji tụgbuo ya. Ndị na-eso ụzọ ahụ echeghị maka Lazarọs ma ọ bụ na ha achọghị ka ha hụ ebube Chineke, ma ha na-atụ egwu maka ndụ ha.
N'oge ahụ, Jizọs ji ihe atụ nke mmadụ na-aga na-aga n'enweghị nsogbu n'ehihie, ma n'abali ọ pụrụ ịdaba na ihe mgbochi na ndagwurugwu. Ka oge nke ikpogidere na-abịa nso, oge awa nke ọnwa adịghị agwụ. Ha aghaghị ịga Jeruselem n'ụzọ dị jụụ, na-enwe obi ụtọ n'aka Chineke.
Onye ọ bụla nke na-atụkwasịghị obi na nduzi Chineke, ga-ebi n'ọchịchịrị dịka ndị iro Jizọs, n'ihi na ìhè nke okwukwe adịghị adabere na ha. N'ụzọ dị otú a, Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha tụkwasị ya obi na nduzi ya. Ma obugh uzo ekwegh ekwe ekwe gaedu ha n'abali. Nke a bụ nkasi obi anyị n'oge awa kachasị njọ na ọ dịghị ihe ga-adakwasị anyị na-enweghị uche nke Onyenwe anyị. N'ime ya bụ obi ike anyị.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, ekele gị maka ịbụ Nna nke ndụ; n'ìhè gị anyị na-ahụ ụzọ. Ị na-eduga anyị n'ụzọ ziri ezi, ọbụna mgbe ndị iro gị chọrọ ka anyị bibie. Nyere anyị aka, ọ bụghị igbu oge, kama dịrị njikere maka mgbu na ọnwụ n'ihi gị. Ka okwukwe anyị wee nye anyị otuto site n'aka anyị.
Gịnị mere Jizọs ji kwuo banyere ebube Chineke, ọ bụ ezie na Lazarọs nwụrụ?